शल्यक्रियापछि द‍ृष्टिविहीन : क्रिश्चियन संस्थाको शिविरमा ल्याइएका ‘डाक्टर’ को लापरबाही | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← बारामा फेरि हावाहुरी, केही घरका छाना उडायाे
राजेशपायल राईको ‘दर्शन नमस्ते’ ४ सार्वजनिक (भिडियो सहित) →
Posted on 09/04/2019 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
सिरहा : क्रिश्चियन संस्थाले गरेको निःशुल्क शिविरमा शल्यक्रिया गराउँदा कम्तीमा ५ जनाको आँखाको ज्योति गुमेको छ। शल्यक्रियाका लागि कोरियाबाट स्वास्थ्यकर्मीको टिम ल्याइएको थियो। तिनले दिएका झोल दबाईमा पनि के लेखिएको छ, बुझिँदैन।फाल्गुन १३ देखि १५ सम्म राखिएको शिविरमा ७७ जनाको शल्यक्रिया भएको थियो। तीमध्ये अधिकांशमा महिना नबित्दै आँखामा गम्भीर समस्या देखिएको थियो। कर्जन्हा नगरपालिका ८ थल्हा र आसपासमा सोमबार अन्नपूर्ण पोस्ट् पुग्दा ५ जनाको ज्योति गुमेको पाइयो। अन्य गाउँबाट उपचार गराएकाहरूको अवस्था खुल्न सकेको छैन।
ज्योति गुमाउनेमा थल्हाका कलम हुसैन, रामझरी पासमान, देवलाल राउत, गौतारीका गोलियादेवी पासमान र विन्देश्वरी पासवान छन्। उनीहरूले फाल्गुन १५ गते फुलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पतालमा भएको शिविरमा मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया गराएका थिए।
फुलकुमारी मेमोरियल अस्पतालमा ‘रिचिङ द नेशन’ (आरटीएन) स्कुलले शिविर आयोजना गरेको थियो। त्यसमा अस्पतालको साझेदारी रहेको बताइए पनि उसले ठाउँमात्र दिएको दाबी गरेको छ। आरटीएन स्कुल क्रिश्चियन संस्थाले चलाएको हो। उसले दक्षिण कोरियाबाट ३० जनाभन्दा बढीको टोली शिविरका लागि ल्याएको थियो। त्यसमा विशेषज्ञ चिकित्सक भएको बताइए पनि प्रमाणित हुन सकेको छैन। शल्यक्रियापछि उनीहरुलाई दुई किसिमका झोल औषधी दिइएको थियो। त्यसलाई एक महिनासम्म प्रयोग गर्न भनिएको थियो। औषधीको नाम कोरियाका माषामै छ। उनीहरुको के के जाँच भयो ? शल्यक्रियापछि कुन कुन औषधी दियो ? त्यो उल्लेख छैन। आफूहरुलाई नामदर्ताको पुर्जासमेत नदिएको पीडितले सुनाए।
‘गाउँमा विदेशी डाक्टरबाट निःशुल्क उपचार हुँदैछ भन्ने खुब प्रचार सुनें, त्यसकै भरमा लागेर शिविरमा गएँ,’ हुसैनले भने, ‘निःशुल्क शल्यक्रियाले आँखाको ज्योती नै लग्यो। खेतमा गहुँ कटान गर्नुछ, आँखामा समस्या भएपछि काम गर्न सकेको छैन।’ शल्यक्रिया गराएको ५ दिनभित्रै आँखाको दृष्टिमा समस्या आउन थालेको उनले सुनाए।
ध्येय धर्म प्रचार
शिविर आयोजना गरेका आरटीएन स्कुलमा २ सय ९० विद्यार्थी निःशुल्क पढ्छन्। शर्त छ– अभिभावक क्रिश्चियन हुनुपर्ने। धर्मकै प्रचार स्वरुप स्कुलले शिविर आयोजना गरेको हो। उक्त स्कुललाई ‘गुड पिपुल नेपाल’ नामको एनजिओले आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ।
शिविरमा चिकित्सकको लापरवाहीले नभएर विरामी आफै लापरवाही गरेको हुन सक्ने आरटीएन स्कुलका उपाध्यक्ष नागेन्द्र पासमानले दाबी गरे। शिविरका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति पनि लिएको उनले बताए। आफुहरु क्रिश्चिन भएपनि स्कुलमा धर्म प्रचारभन्दा सेवाका लागि गरिब विद्यार्थीहरुलाई पढाउने गरेको उनको जिकिर छ।
फुलकुमारी अस्पतालले स्थान मात्रै उपलब्ध गराएको मेडिकल डाइरेक्टर डा. शिवशंकर साहले बताए। ‘हामी आयोजक होइनौं। स्थान मात्र उपलब्ध गराएको हो’, उनले भने, ‘चिकित्सक, औषधी र उपचार सामग्री सबै कोरियाबाटै ल्याएका हुन्।’(अन्नपूर्ण )